စက်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအကွေ့အကောက်များသောနယူးအသုံးပြုသူဝယ်ယူ - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
အချိန်: 2019-02-16 hits:
zhuji အားဖြင့်အထည်အလိပ်စက်ပူးတွဲ feihu ။, Ltd
အကွေ့အကောက်များသောစက်တွေများ၏ဝယ်ယူပြီးနောက်ဖောက်သည်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါ, ဖောက်သည် \_ 's ထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်ခဲ့သည်, theseproblems တစ်သတိထားဆန်းစစ်အကြမ်းဖျင်းအောက်ပါဒေသများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်.
စက်ပတ်ဝန်းကျင်သုံးပြီးအပေါ်တိကျစွာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်ဆိုင်အကွေ့အကောက်များသော၏မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, စိုစွတ်သော, မြေမှုန့်, နှင့်တုန်ခါမှုကဤသုံးပြီးပုံမှန်၏အကွေ့အကောက်များသောစက်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဦးမည်, စက်အကွေ့အကောက်များသော၏ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရေရှည်, wear နှင့်ပုံမှန်ပြည်နယ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကို non-ပုံမှန်နေကြတယ်; ပုံမှန်ပေးဝေရေး၏အာဏာအလွန်အရေးကြီးပါသည်, ဗို့အားအတက်အကျအတွက်အကွေ့အကောက်များသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုခြင်း၏ကြီးမားသောအပူချိန်နှင်းဆီ၏ပုံမှန်မဟုတ်သည်ထင်ရှား, နှင့်အပူနှင့်ခြွင်းချက်၏လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်က, စက် controller ကိုအကွေ့အကောက်များသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏အလွန်တိကျစွာဖြစ်ပါသည်, ပိုမြင့်သောလိုအပ်ချက်များကိုအာဏာအပေါ်, အရည်အချင်းပြည့်မီသောဖောက်သည်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ circuit ကို power supply circuit ကို Terminal နှင့်တစ်ဦးထိန်းညှိတပ်ဆင်ထားသည်ရှိသင့်.
2. မလျော်ကန်အနေဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသောကိစ္စများ setting အကွေ့အကောက်များသော parameters တွေကို
ညာဘက်အစု၏စက် parameter သည်အကွေ့အကောက်များသောမပါဘဲသာမန်အလုပ်၏စက်အကွေ့အကောက်များသော, parameter သည် set ကိုအမှားအယွင်းများလည်းစက်ကပုံမှန်အလုပ်မရနိုင်အကွေ့အကောက်များသောစေသည်ပါလိမ့်မယ်, ရှီသုံးပြီးအတွက်အသုံးပြုသူလက်ျာဘက်အစုံအဘို့အစက်အကွေ့အကောက်များသောအပေါ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်မှတ်သားသင့်တယ်, စက် parameter သည်အကွေ့အကောက်များသော၏ဘုံအချက်များကိုန်းကျင်အထိရှိပါတယ်, နှင့်ကျယ်ပြန့်အကွေ့အကောက်များသော, နှင့်စုစုပေါင်းစက်ဝိုင်းအရေအတွက်ကို, နှင့်တက်န်းကျင်နှေးကွေးနေ, နှင့်နှေးကွေးရပ်တန့်,, ဤအ function ကိုပေါ်အတွက်စက်ကို manual အကွေ့အကောက်များသောအသုံးပြုသူကိုးကားဖော်ပြချက်များနှင့်လျှောက်လွှာဥပမာအသေးစိတ်ထားပါတယ်.
ညာဘက်ယုရှိမရှိ၏အကွေ့အကောက်များသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်, အလိုအလျှောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွိုင်ပတ်ပတ်လည်၏ပုံမှန်စက်လုပ်နိုင်တဲ့အကွေ့အကောက်များသောနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, အကွေ့အကောက်များသောလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ထိရောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်, ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချဝါယာကြိုး, အစားဖြစ်စဉ်ကိုအကွေ့အကောက်များသော၏အမှားများကိုဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းမပေးကွိုင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ပတ်လည်စက်အကွေ့အကောက်များသောစေသည်, အလုပ်ရှီအတွက်စက်အကွေ့အကောက်များသောဝါယာကြိုးများနှင့်အရိုးစုကို အသုံးပြု. လိုအပ်, အခန်းကဏ္ဍသည်အလွန်အရေးကြီးသောနှင့်အတူပုံမှန်အလုပ်တက်၏စက်အကွေ့အကောက်များသောအပေါ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ဤအ, ကြွေအလိုတော်ယုတ်ညံ့မဟုတ်သေသပ်စွာအတန်းလိုင်းစေသော, အရိုးစုအလိုတော်၏ပုံပျက်သောရှီဗိုင်းလိပ်တံလှုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့စက်အကွေ့အကောက်များသောစေသည်, အစွန်း stack လိုင်း, ပြဿနာ.
နောက်တစ်ခု : နောက်ထပ်သစ်ပင်များပိုမို GREEN